गाउँले-बहिनीको-दुध-चुसे | Kamsastra
Sex, गाउँले-बहिनीको-दुध-चुसे, दिदीभाई, नेपाली यौन कथा,
मेरो गाउँको एक जना बहिनी काठमाण्डुमानै बस्थी । उनको नाम प्रिया हो र उनि २१ बर्षकी थिई । कहिलेकाँहि फोनमा कुरा हुन्थ्यो त कहिलेकाँहि भेट पनि हुन्थ्यो । एक दुई चोटी मलाई भेट्न मेरो घरमा पनि आएकि थिई । प्राय साधारण गफ गाफ मात्रै हुन्थ्यो । प्रिया बानेश्वरमा भाई र बहिनी सँग बस्थी । उसको बी. बी. एस.को परीक्षा सकेको थियो । एकदिन म अफिसमा भएको बेला प्रियाको फोन आयो । मैले के छ ! कसो छ ? भनि हालखबर सोँधे । सबै राम्रै रहेको जानकारी गराईन । उनका भाई र बहिनी कामको सिलसिलामा गाउँ गएको बताई । अनि मैले सोँधे “एक्लै बस्नु डर लाग्दैन ?” उनले “लाग्दैन” भन्ने छोटो जवाफ दिई । उनले “मेरो मोवाईलको व्यालेन्स सकियो , यता १०० को रिचार्ज कार्ड नै पाईन , सक्नु हुन्छ भने ल्याईदिनु होस न !” भनि । मैले पनि “अफिसको काम सकेर लिएर आउँला” भनि जवाफ दिए । करिव ३ बजे तिर सबै काम सकिओरी म मोटरसाईकल लिएर निस्के ।
वाटोमा १०० को रिचार्ज कार्ड र २ प्याकेट चिप्स किनेर म प्रियाको डेरा तिर लागे । गेटमा मोटरसाईकल रोकेर उनलाई मिस कल गरे , उनि ढोका खोल्न आई । भर्खर नुहाएर बसेकी रहिछन , कपाल चिसै र खुल्लै थियो । म सरासर उसको पछि पछि कोठा तिर लागे र चिप्सको झोला र रिचार्ज कार्ड उनलाई दिए । “बस्दै गर्नुहोस है , म चिया पकाएर ल्याउँछु ” भन्दै उनि किचन तिर लागि । एक छिन कोठामै बसे र पिसाब फेर्न भनि म ट्वाईलेट तिर छिरे । पिसाब फेर्दै चारैतिर हेरे , उनले भर्खर खोलेर सुकाएको हरियो पेन्टी देखे । खोई मलाई के भयो भयो , उनको पेन्टी हातमा लिएर सुँघ्न थाले । कस्तो बासना आयो आयो मेरो लाडो त ठनक्क भएर आयो । मलाई खपि नसक्नु भयो र मैले त्यँही छोलिदिए ( हस्ते हाने )। त्यसपछि म बाहिर निस्के र किचन तिर छिरे । उनी चिया गिलासमा राख्दै थिई । म उनको छेउमा बसेर हेरि रहेको थिए । “के हेर्नु भएको ?” भन्दै मलाइ उनको कण्डोले धक्का दिई । मैले पनि “केहि होईन , चिया कसरी बनाउछ भनेर हेरेको नि” भन्दै उनीलाई मेरो कण्डोले धक्का दिए । “जाऊँ कोठामै बसेर चिया खाउँ” भनि र म पछि पछि कोठा तिर लागे । कोठामा बसेर टी. भी. हेर्दै चिया खान थाल्यौ । म बढी SPORTS CHANNEL हेर्ने भएकोले रिमोट हातमा लिएर च्यानल बदल्न थाले । बदल्दै गर्दा FASHION TV आयो र एकछिन हेरे । त्यहा केटिहरु दुधको पोका प्रष्टै देखिने पातलो लुगा लगाएर फेशन शो गर्दै थिए । “छ्या , कस्तो च्यानल हेरेको , अर्को लाउनु ” भनेर उनले रिमोट खोस्न खोजि । मैले हतार हतार रिमोट अर्को हातमा लिएर भने “के को छ्या नि , कहिले काँहि हेर्नु पर्छ ।” उनी मनिनन् र जबरजस्ती रिमोट खोस्न थाली । यतिकैमा म खाटमा थिए उनी मेरो माथी थिई । मैले बिस्तारै उनको कम्मरमा काउकुति लगाईदिए । धेरै काउकुति लाग्ने रहेछ । मैले “खोई काउकुति त मजाले लाग्ने रहेछ , फेरि लगाउँ” भनि उनको घाँटी तिर छोए । प्रिया हाँस्न थाली । मौका यहि हो भनेर उनलाई काउकुति लाउन थाले । लाउँदा लाउँदै उनको दुधको पोकामा छोए । केहि नभनि हाँसि मात्र रहि । “के खोज्छस् कानो , आँखो” जस्तै भयो र मैले उनलाई काउकुति लाउने बहानामा उनको दुध तिर छुन थाले । उसलाइ पनि मजा आउन थालेछ , चुपचाप बसि रहि । मेरो लाडो ठन्किन थालि सकेको थियो । कति खेर चिकौ चिकौ हुन थाल्यो तर डर पनि लागि रहेको थियो । यतिकैमा मैले उनलाई अङ्गालोमा हाले र निधारमा चुम्बन गरे । मेरा दुई हात हरू प्रियाको दुधको पोका माड्नमा व्यस्त थियो । बिस्तारै निधारमा चुम्बन गर्न छाडेर उनको ओँठमा चुम्बन गरे । ओँठहरु चुस्न थाले । प्रिया पनि शिथिल हुन थालि । उनलाई काखमा राखेर टि-शर्ट बाहिर बाटै दुधको पोका माड्न थाले । केहि छिन पछि उनको टि-शर्ट खोलि दिए । ब्राको हुक खोलेर दुध माड्न थाले । भर्खरको केटीको दुध कति राम्रो हुँदो रहेछ । सानो-सानो मुण्टा , ठिक्क हातमा अटाउने पोका । साह्रै आनन्द महसुस भई रहेको थियो । त्यस पछि मैले प्रियालाई खाटमा सुताए र उनको नाङ्गो शरीर हेर्न थाले । उनी आँख चिम्लेर चुपचाप पल्टि रहिन । त्यस पछि उनको ब्रा पनि खोलिदिए अनि दुध चुस्न थालेँ । “आहहहह , आहहहहहह” कराउन थालि । प्रियाको दुईटै दुधको पोका करिब १० मिनट जति चुसि रहे । मलाई चिक्न मन लागिसकेको थियो । भर्खरको केटीको पुती कस्तो होला भन्ने उत्सुकता जाग्यो र मैले मेरो हात उनको पुती तिर लगे । “नाई यो भन्दा धेरै नगर्ने ” प्रियाले भनि । “ल ल , अरु केहि पनि नगर्ने , छुन्छु मात्रै ल ” भन्दै उनको पाईन्ट भित्र हात हाले । नरम नरम भुत्लाले भरिएको उनको पुतीमा हात पुर्याए । पुती त पुरै भिजी सकेको रहेछ । मैले दुईटा औलाले प्रियाको टीसी खेलाई दिन थाले । अब उसलाई पनि खपि नसक्नु भएछ र मेरो हात निकाल्दै भनि “भयो अब, यस्तो गर्नु हुन्न । प्लिज !!!” मैले पनि हुन्छ भने र फेरि दुधको पोका माड्न र चुस्न थाले । केहि छिन पछि हामी उठ्यौ र उनको ब्राको हुक लगाई दिएँ र “कपाल र कपडा मिलाउ” भने । घडी हेरेको त ६ बज्न लागि सकेछ । “प्रिया अब म जान्छु है , पछि फेरि भेटौला” भने । उनि मलाई अङ्गालो मार्न आई र मलाई चुम्बन गर्न थालि । मैले पनि फेरि कपडा बाहिर बाटै दुध माड्दै चुम्बन गर्न थाले । ३-४ मिनेट पछि हामी छुट्टियौ र म आफ्नो झोला बोकि बाहिर निस्कन थाले । उनि पछि पछि मलाई ढोका सम्म पुर्याउन आई । मायालु नजर र अतृप्त भावनाले मलाई प्रियाले बिदा गरिन । गर पुगेर प्रियाको दुध र पुती सम्झिदै ३ पटक छोले र आफ्नो काम तिर लागे ।
Labels: Sex, गाउँले-बहिनीको-दुध-चुसे, दिदीभाई, नेपाली यौन कथा